चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न डा. शेखरको माग
विराटनगर, ३० असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा चीनले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको कुरा गम्भीर विषय भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. कोइरालाले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको विषय गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
‘हुम्लाको चीनसँगको सीमाको स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएका पार्टीका साथीहरूबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएँ । यो गम्भीर विषय हो । यस सम्बन्धमा तुरुन्त विज्ञहरूको टोली खटाई सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
यसअघि नै कांग्रेसले चीनले नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदनले भूमि मिचिएको पुष्टि हुने आधार भएकाले कांग्रेसले बताएको छ ।
चीनको तर्फबाट सीमाना मिचिएको खबर बाहिर आएपछि सरकारले हतारोमा टिप्पणी गरेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको थियो । पिलर नजिकै चीनले तारबार गरेको, नेपाली भूमिमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको र एउटा पिलर भरखरै निर्माणको गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका थिए ।
‘स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको टोलीको पतिवेदनका आधारमा राजनीतिक दल र राज्यले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमा मिचिएको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो । अहिले टोली फर्किएर आउँदा पनि न प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गरेन,’ शर्माले भनेका थिए ।
प्रवक्ता शर्माले पार्टीको तर्फबाट शाहीको नेतृत्वमा असोज १४ गते लिमी लगायतका ठाउँमा स्थलगत अध्ययनका लागि गएकोमा टोलीले सीमा मिचिएको प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताएका थिए ।
हालै कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको चीनसँगको सीमाको स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएका पार्टीका साथीहरूवाट नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएँ। यो गम्भीर विषय हो। यस सम्बन्धमा तुरुन्त बिज्ञहरुको टोली खटाई सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।
— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) October 16, 2020